Digimind: Nchịkọta Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi maka priselọ Ọrụ | Martech Zone
Satọde, Ọgọstụ 27, 2016 Satọde, Ọgọstụ 27, 2016 Douglas Karr
Digimind na-eduzi nlekota oru mgbasa ozi nke SaaS na ulo oru ọgụgụ isi asọmpi nke ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ na ha. Companylọ ọrụ ahụ na-enye ọtụtụ azịza:
Digimind Social - iji ghọta ndị na-ege gị ntị, iji ahịa ROI gị na-elekọta mmadụ, yana nyocha aha gị.
Digimind ọgụgụ isi - na-enye asọmpi na nlekota ụlọ ọrụ ka ị nwee ike ịtụ anya mgbanwe ahịa ma chọpụta ohere azụmaahịa.
Commandlọ Ọrụ Iwu Ọha - Ngosipụta oge-oge iji gosipụta ngosipụta mmekọrịta nke ika gị.
Iji Digimind Social, ị nwere ike nyochaa, nyochaa, tinye aka, kọọ, tụọ ROI, ma jikwaa aha gị n'ịntanetị.
Digimind bu ihe puru iche na ha mekorita Ditto ma jikọta usoro ihe onyonyo iji nweta ngwa ọrụ ha, na-enye ndị ụdị ohere ohere inyocha mmekọrịta mmadụ na ibe ya nke nwere ike ịbụ ọhụụ na enweghị ederede ederede!
Ọganihu a nwere ike iji ọtụtụ ụzọ:
Nyocha arụmọrụ nke nkwado ma ọ bụ mmekorita n'oge egwu, egwuregwu ma ọ bụ ihe omume ọdịnala, yana ịlele akara ngosi na usoro nke ederede anya nke na-ekwughi aha ahụ na ederede.
Chọpụta onye ọhụụ ọhụụ obodo ma ọ bụ ndị nnọchi anya nnọchi anya ika na-eziga onyonyo nke akara a mana ekwughi ya na ederede.
Nweta nghọta doro anya banyere àgwà ndị ahịa na mmetụta kwupụta ika ngwaahịa na ọrụ.
Nchedo ika megide aghụghọ, dị ka ngwaahịa adịgboroja, si otú ahụ na-ebelata nsogbu nwere ike ịdị.
Egwuregwu Ọgụgụ Obi
Na-elekọta mmadụ na n'ọtụtụ - Nweta ohere Twitter Firehose, Pinterest, Instagram na netwọkụ mmekọrịta mmekọrịta kachasị nwere ihe karịrị nde 120 nde ozi enyocha kwa ụbọchị.
Nlekota oru di elu - Nweta ngwaọrụ mmịpụta, ndị na-agagharị ọgụgụ isi, ebe nchekwa na paswọọdụ na-adịghị ahụ anya.
Ederede ederede - Nchịkwa Asụsụ Eke na-arụ ọrụ na ntanetị na ntanetị na nyocha nyocha nke akpaka na-akpaghị aka na nchọpụta ihe omume.
Nyocha oge - nyocha nke oge nke data ihe omuma na igwe na-enyocha 14.
Imekota & Social - Jikwaa ọrụ zuru ụwa ọnụ maka otu nha niile na njikwa ikike, usoro mmekọrịta mmadụ na atụmatụ mmekọrịta.
Ndị na-anapụta mmadụ - Akwụkwọ akụkọ, akụkọ e biri ebi, ọkwa, ndetu ihe nkiri, ebe nrụọrụ weebụ - ma na desktọọpụ ma na mkpanaka (gụnyere iOS na gam akporo).
Sony ahọrọla Digimind maka ọrụ mmekọrịta anyị na-elekọta mmadụ dị ka ngwa ọrụ ha nyere maka ihe anyị chọrọ, yana ndị ahịa siri ike na oge mgbanwe ngwa ngwa na arịrịọ anyị. Tan Khim Lynn, Sony Onye njikwa azụmahịa
Bido Nnwale Digimind efu
Tags: digiminddigimind ọgụgụ isidigimind elekọta mmadụdittolait ụlọụlọ ọrụ na-elekọta mmadụ iwu centerụlọ ọrụ na-elekọta mmadụ mediaoyiyi udeezigbo oge nyocha mgbasa ozi mmekọrịtaụlọ ọrụ iwu na-elekọta mmadụelekọta mmadụ medianchịkọta mmadụ mgbasa ozinlekota oru mgbasa ozimgbasa ozi mgbasa oziNgwuputa ederede ndi mmaduederede ederedentị ntị